မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီး ( A.B.M.A ): June 2009
သံဃာတော် ထက်ဝက်ကျော်က ဦးအောင်သောင်းအလှူ သပိတ်မှောက...
Maybe revolutions will be televised after all Burm...
တနင်္သာရီ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအတွက် ကွင်းဆင်း လေ့...
နို့ဘိုးကန့်ထဲက ဒေါ်စု မွေးနေ့
စစ်ကိုင်းတောင်မှ သီလရှင်ဆရာလေးများ ဆွမ်းဆန်အခက်အခဲ...
လုံခြုံရေးအတွက် ဒေါ်စု ပူးပေါင်းမှုမရှိဟု ခွေးသားခင်...
နအဖ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန၏ အီရန်ခရီးစဉ် လျှို့ဝ...
ရန်ကုန် ဇာတ်သိမ်း ကိုလူထွေးအနှစ်နှစ်အလလ "ငါကွ" ရ...
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတစ်ရပ်လုံးအပေါ်မှာ စော်ကာ...
အာဏာရှင်လက်ပါးစေတွေကို လက်တွေ့ တုန့် ပြန်ကြဖို့ ...
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၉-၆-၀၉) (ဒေါ်အောင်ဆန်းစြု...
ဒေါ်စုမွေးနေ့ အလှူဒါနပွဲများ ပြည်တွင်း မြို့နယ်များမ...
မြင့်မြတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။
နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင...
လူထုတိုက်ပွဲ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ချက် တည်ဆောက်ဖွဲ့စည်းခြ...
အမှတ်စဉ်( ၁ )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကြိုးပန်းမှုတ...
အီရန် လူငယ်တွေကို အတုယူကြ
for all Myanmar , မျှော်လင့်နေသူတို့ရဲ့ မျှော်လင်...
ဂိုချောက်တောင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လေးရက်ကြာ လည်ပတ်မ...
မဲဆောက် မြ၀တီ ချစ်ကြည်ရေးတံတားအနီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစြု...
မန္တလေးမှာ ပလပ်စတစ်ထုတ်ပိုးပစ္စည်း မသုံးရ အမိန့်ထုတ်...
ဇွန် ၁၉ မွေးနေ့ရှင် လူထုခေါင်းဆောင်အတွက် ၆၄ နှစ်ြေ...
Handheld Human Rights & the need for tech in Burma...
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၅-၆-၀၉)
ကော့သောင်း-ရနောင်း ဖြတ်ခွင့်ပိတ်လိုက်သောကြောင့် ပြ...
နအဖနှင့် ဒီကေဘီအေ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုစတင် ရွာသားများထ...
အမေရိကန် သံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြသူများ အဖမ်းခံရ
JAC(Mae Sot) မှ ဦးဆောင်၍ မဲဆောက် Love God Church ...
ရန်ကုန်မြို့တွင် စီအင်န်ဂျီ ဓာတ်ငွေ့ အရောင်းဆိုင် ...
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာသော ဗမာ...
မဲဆောက်တွင် နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ဖွင့်ရန် စီစဉ်နေ
မြန်မာ့အရေး လုံခြုံရေးကောင်စီ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖ...
ကျော်ဆန်း ရေ ကြည့် လည်း အာပါဦး
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂-၆-၀၉)
သက်သေပယ်ချခံကိစ္စ ဒေါ်စု အကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေ တိုင်း...
Yettaw ဆိုတဲ့ ခွေးမသားအဖြူစုတ် ဘာကောင်ဆိုတာ ပေါ်ပြီ...
6th anniversary of depeyin massacreFree Daw Aung S...
ASSK interviewed by NBC's Date-line Hoda Kotbe Par...
xxxဆရာကျော်ဝင်းရေးခြင်း၊ မရေးခြင်းကို အငြင်းပွါးေ...
သန်းရွှေညွှန်ကြားမှုဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ဒီပဲယင်း လ...
လူသားရယ်လို့ဖြစ်ရင် လူ့ အခွင့်အရေးကို နားလည်သောသ...
Invitation for Conference 2009, USA
စက်မှု (၁) ဝန်ကြီး ဦးအောင်သောင်းသည် မြင်းခြံမြို့သို့ ရောက်ရှိနေစဉ်
မြင်းခြံသံဃာတော်များအား ယနေ့နံက် အာရုဏ် ဆွမ်းလောင်းရာ ကြွနေကျ...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး A (H1N1) ရောဂါဖြစ်ပွားသူဟု တရားဝင် ထုတ်ပြန်
ကြေညာခံရသည့် ၁၃ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူလေးအား...
Posted by Sanghaalliance at 8:28 PM0comments
“အန်အယ်လ်ဒီဌာနချုပ်ဟာ ဆွံ့အနားမကြားကျောင်းတခုလို ဖြစ်နေတယ်” လို့ ပြောလိုက်တဲ့ လူထုစိန်ဝင်းနဲ့ အင်တာဗျူး (အာရ်အက်ဖ်အေ)
ဟုတ်ကဲ့ ဘာမှထိရောက်မှု မရှိပါဘူးခင်ဗျ။ ဘာမှထိရောက်မှု မရှိပါဘူး။ ကုလသမဂ္ဂက အခုနက ဦးသန့်ပြောခဲ့ တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ဘာအခွင့်အာဏာမှမရှိတဲ့ toothless tiger ပါပဲ။
ဟုတ်ကဲ့ဆရာ ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို အခုအချိန်အထိ လုံးဝ လက်မခံသလို လက်ခံမယ့် အလားအလာလည်း မတွေ့ရဘူးခင်ဗျ။ အဲတော့ ဒီကိစ္စက ဖြစ်နိုင်ခြေရှိ ပါ့မလား။
Posted by Sanghaalliance at 8:21 PM0comments
Maybe revolutions will be televised after all Burma reporters take risks to document uprising
Photo by Matt Dodge Photo
Buddhist monks U Gawsita, head monk U Pyinya Zawta, and U Agga discuss the struggle of the Burmese people Wednesday night at Space Gallery. (MATT DODGE PHOTO)
Forget flag burnings, protest signs and sit-ins.
Today, the tools of dissent for the world’s most oppressed societies are sleek, metallic, and always get their shot. The names Kalashnikov and Uzi might seem likely brand names for the tools of uprising, but this being the information age, it's Sony and Canon that areadissident’s weapon of choice.
The film "Burma VJ," screened locally Wednesday and Thursday at Congress Street’s Space Gallery and available on BumaVJ.com, illustrates the point. Shot at great personal risk by undercover reporters in the Southeast Asia country, the movie uses devices from cell phone cameras to carefully concealed camcorders to overcome government reporting bans.
Members of the underground media organization Democratic Voice of Burma, defying restrictions that have kept foreign journalists out of the military-ruled country for years, saw their clips and photos broadcast to the world, from BBC to CNN, and acted as the lone lens inacountry where any show of dissent would likely mean imprisonment or death.
Burma is ranked 170th out of 173 countries in Reporters Without Borders’ 2008 world press freedom index.
“I feel like the world is forgetting about us. This is why I becameareporter,” said the film’s narrator,a27-year-old video journalist using the name “Joshua” who distributed media and coordinated the efforts of DVB reporters fromapost in Thailand, where he had escaped to avoid persecution.
Danish director Anders Østergaard gives the world an inside look at Burma’s 2007 Saffron Revolution, when thousands of Buddhist monks and Burmese citizens took to the streets to protests the oppressive military junta, which has ruled the country since 1962.
The revolution took its name from the distinctive hue of the Buddhist monk’s robes. Inacountry withapoor social service system, the monks and their monasteries provide Burma’s citizens with food, medical care, shelter, and act as the moral arbiter inacountry that is 89 percent Buddhist.
The Space screenings featuredapost-film Q&A session with three refugee monks who recounted their experiences, imprisonments and political ideology, and explained the important role they played in the brief uprising, which was ultimately quelled by the military government inacrackdown that took an estimated 138 lives, according to DVB.
“These monks are the heart of the country,” said Nickie Sekera with The U.S. Campaign for Burma at Wednesday’s screening, “outside of the military schools, they are the educational system as well, teaching about taboo topics like human rights and foreign policy.”
Burma also has rates of HIV/AIDS equal or higher than that of some sub-Saharan countries, and with the government not allowing aid organizations inside the country, the monks have stepped up to provide shelter and treatment to the affected Burmese.
Buddhist monks are not supposed to get involved in political matters, but have broken this rule on occasion for thousands of years to protect the people of Burma. During the Revolution, the BBC called the thousands of marching monks “a powerful voice of dissent inadevout nation.”
“I don’t know anything about politics,” said head monk U Pyinya Zawta throughatranslator, “I want one thing, which is freedom for the people.” Zawta spentacombined 10 years incarcerated asapolitical prisoner, with two-and-a-half of those spent in solitary confinement.
Sekera notes that inacountry where prisoners are fed little to nothing, and rely on their families to bring them food and medicine, political prisoners have it especially hard, as they are imprisoned far from their hometown making such visits difficult.
“These political prisoners suffer the most,” said Sekera.
Buddhist doctrine also dictates that the monks cannot eat anything after noon, meaning that the political prisoners must stash their daily bowl of rice — served at2p.m. “If they can keep the rats from eating it, they can eat the next day,” said Sekera.
Tensions between the government and citizens came toahead in September 2007, when the government stopped fuel subsidies, effectively doubling the price for fuel and placingahuge economic burden on the Burmese people. This, in conjunction with the beating ofamonk by soldiers in the northern part of the country, sparked the revolt, which is painstakingly documented in the film.
“The military refusing to apologize [for the beating of the monk] was their way of saying ‘no, we are above you,’” said Sekera, an act that upset many in the devout nation.
The military government has also kept the democratically elected, western-educated Prime Minister-elect Aung San Suu Kyi under house arrest for 134 of the last 19 years since she was elected by an overwhelming majority in the 1990 general election on the ticket of the National League for Democracy. Following the election, the military government nullified the results and refused to hand over power.
For it’s part, the U.S. Congress is currently trying to renew it’s sanctions on Burma — currently set at the highest possible level — and is working to enactaarms embargo, as well as drumming up support for the Burmese Freedom and Democracy Act, which has been in the works since 2003 and recently received support from Maine Congresswoman Chellie Pingree.
The screening at Space was part of the venue's social justice series, which began in December.
“The presence of the monks addedagreat deal to what we learned and what we could feel about their experience,” said Leo Barrington of Portland.
Ralph Davis said the film led him to draw all kinds of connections to the current situation in Iran, where social media sites like Twitter are being used to smuggle news out ofacountry underamedia blackout. “It’s important that the communications and videos get out because the totalitarian government is just trying to shut down the media so it can silence the masses,” said Davis.
But the government crackdown on these communications in Iran has been swift, with cell phone service being disconnected in some areas to stop the text-message based “tweets” from reaching the outside media.
“Some friends of mine are involved in it by positing proxy sites, so that someone can Twitter to outside the country and it goes to someone else’s computer so they can circumvent the censorship,” Davis added.
The monks ended their Q&A session by offering upaprayer in both Burmese and English.
“May love and kindness envelop the world, may there be no deception of one another, and may there be peace on Earth,” echoed the three monks.
Posted by Sanghaalliance at 12:55 PM0comments
မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးသံတမန် မစ္စတာ အီဘရာဟင် ဂမ်ဘာရီသည် သူ၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ယခုသီတင်းပတ်ကုန်တွင် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ထံ အစီရင်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုလအဆင့်မြင့် အရာရှိတဦးက...
အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေဝင်း၏ အစိုးရမှ ပထမဆုံး ကြိုးမိန့်ပေးခဲ့သူ ချင်းကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး ကျဆုံးသည့် ၃၃ နှစ်မြောက်နေ့ ယနေ့တွင် တောင်ကိုရီးယား ဆိုးလ်မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးရှေ့၌...
စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြရာတွင် ဦးဆောင်ခဲ့သူ အရှင်ဂမ္ဘီရအား အနောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၅နှစ် ယမန်နေ့က လျော့ချပေးလိုက်သည်။ သံဃာ တပ်ပေါင်းစု ခေါင်းဆောင် ဦးဂမ္ဘီရအား...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်များနှင့် ထင်ရှားသော ခေါင်းဆောင်များ) ...
၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလတွင် တဟုန်ထိုး မြင့်တက်သွားသော လောင်စာဆီဈေးနှုန်းကြောင့် ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစေခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်...
ပဲခူးတိုင်းအတွင်း မြို့နယ်အချို့၌ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဓာတ်ပုံများကို အန်အယ်ဒီ လူငယ်များသည် ယမန်နေ့က လိုက်လံဝေငှခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ လူစည်ကားရာ...
မြေအောက် အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု (အီရန် ရုပ်ရှင်ကား)
အာဏာရှင်စနစ်ကို အခြေခံထားကာ တယူသန် ဘာသာရေးဝါဒီများ အုပ်ချုပ်သည့် အီရန်နိုင်ငံတွင် အနုပညာသမားများ၏ လွတ်လပ်စွာ ဖန်တီးနိုင်မှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုမှာ မည်မျှပင်...
ပိုက်ဆံချေးပြီး အစားအစာ ဝယ်ယူရသည့် အတွက် ချင်းပြည်နယ်ရှိ ဒေသခံ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အကြွေး တင်လျက်ရှိသည်ဟု ရန်ကုန်မှ ကုလသမဂ္ဂ အရာရှိ တဦးက ဧရာဝတီကို
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်ရီအနေနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရားခွင်နှင့် ပတ်သက်ပြီး တဖက်သတ် ပြောဆို၍ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခြင်းမှာ ဥပဒေနှင့်
မိုက်ကယ် ဂျက်ဆင် သီချင်းများ MRTV4ထုတ်လွှင့်မည်
ယမန်နေ့ညက ကွယ်လွန်ခဲ့သည့် ကမ္ဘာကျော် ပေါ့ပ် အဆိုတော် မိုက်ကယ် ဂျက်ဆင် အမှတ်တရ အနေနှင့် သူ၏ ကျော်ကြားခဲ့သော သီချင်းများကို မြန်မာ့ ရုပ်သံ MRTV4၏
ဗန္ဓုလ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှ ပါရမီ တက္ကစီများမှာ ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် နေရာယူပြေးဆွဲလာ ခြင်းကြောင့် ပုဂ္ဂလိက အငှားယာဉ်များ ပြေးဆွဲရန် အခက်တွေ့
Posted by Sanghaalliance at 1:19 AM0comments
To All for Birthday's Speech Ko
Posted by Sanghaalliance at 10:00 PM0comments
အောင်ထက် / ၂၅ ဇွန် ၂၀၀၉ “မနှစ်က စိုက်ပျိုးရာသီမှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ရေငန် ထိုးထားတဲ့ လယ်မြေတွေဟာ (၄-၅) ကြိမ်လောက် မျိုးစပါး ကြဲပက်ခဲ့ရကာ စပါးအထွက်နှုန်း....” အပြည့်အစုံသို့
NEJ / ၂၅ ဇွန် ၂၀၀၉ “ဒီနှစ်ကတော့ ဆွမ်းအလှူခံတာ အခြေအနေမကောင်းဘူး။ လူတွေလည်း ငွေကြေးမတတ်နိုင်ကြဘူးလို့ ဆရာကြီး ထင်ပါတယ်ကွယ်။ တခါတလေ ဆွမ်းဆန် ....” အပြည့်အစုံသို့
လွယ်လွယ်အရပ်သားစကားနဲ့ပြောရရင် စစ်အုပ်စုရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ထောက်ခံသူဟာ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ရဲ့ဘက်သား၊ ကန့်ကွက်သူဟာ ပြည်သူ့ဘက်သား ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ... အပြည့်အစုံသို့
လုံခြုံရေးအတွက် ဒေါ်စု ပူးပေါင်းမှုမရှိဟု ခွေးသားခင်ရီ ရှင်းလင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ အားနည်းခဲ့တယ်လို့ မြန်မာစစ်အစိုးရ ရဲချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ရီက ပြောလိုက်ပါတယ်။
အဓိကအားဖြင့် အန်အယ်လ်ဒီသမိုင်း၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် အယူအဆ ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ အန်အယ်လ်ဒီ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ လှုပ်ရှားမှုသမိုင်း၊ ခေတ်သစ် သိပ္ပံနည်းပညာများ လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် ဂယက်ရိုက်ခတ်မှု၊ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး တည်ဆောက်မှု ပုံသဏ္ဌာန်များ စသည့် ဘာသာရပ်များကို ... အပြည့်အစုံသို့
Posted by Sanghaalliance at 11:31 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 11:10 AM0comments
ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီး... ရောင်နီရောင်ဝါ မီးတွေနဲ့
၂၀၀၆ တော်လှန်ရေးနေ့က စ
ဟိုမလုံ ဒီမလုံ ဖြစ်နေတယ်...
ခြင်္သေ့တွေလဲ 'ဝ' ပြီးရင်း 'ဝ' လာကြတဲ့
ငါ သုံး ပစ် ခဲ့ တယ် ...။ ။
အထက်ဖေါ်ပြပါပုံဟာ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တုန်းက မြောက်ကိုရီးယားတို့ ဗုံးဖေါက်ကွဲမှုလက်ချက်ကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရသည့် မြန်မာလူမျိုးတို့အလေးအမြတ်ပြုရာ အာဇာနည်ဗိမာန် ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သမတ ချန်ဒူးဝမ် (Chun Doo Hwan) မြန်မာပြည်ကို အလည်အပတ်လာချိန် ၁၉၈၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၉) ရက် နေ့ မှာ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ကြီးများရဲ့ဂူဗိမာန်များရှိရာ အာဇာနည်ဗိမာန်ကို သွားရောက် ပန်းခွေချ အလေးပြုဖို့ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားသမတ ချန်ဒူးဝမ် ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ကားလမ်း ယာဉ်များပိတ်ဆို့ နေမှုကြောင့် ရောက်ရှိရမယ့်အချိန်ထက် အနည်းငယ်နောက်ကျနေတဲ့အချိန်မှာဘဲ အာဇာနည်ဗိမာန်မှာ မြောက်ကိုးရီးယားတွေ ဆင်ထားတဲ့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် (၂၁) ဦး သေဆုံးပြီး (၄၆) ယောက် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သေဆုံးသူတွေထဲမှာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဒုဝန်ကြီးချူပ် Suh Suk Joo ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Lee Bum Suk ၊ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Kim Dong Whie တို့ နဲ့သမတရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေ လုံခြုံရေးအရာရှိတွေ သတင်းထောက်တွေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သေဆုံးခဲ့တဲ့ (၂၁) ဦးထဲမှာ တောင်ကိုရီးယားလူမျိုးက (၁၇) ဦးဖြစ်ပြီး မြန်မာလူမျိုး (၄) ဦး သေဆုံးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားတွေဟာ အာဇာနည်ဗိမာန်ရဲ့မျက်နှာကျက်မှာ ဗုံး ၃ လုံး ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားသံအမတ်ကား ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာ သမတ ချန်ဒူးဝမ်ပါရှိလာပြီး အစီအစဉ်စတယ်လို့ထင်ပြီး ချိန်ထားတဲ့ဗုံးများကို ရေဒီယိုကနေ တစ်ဆင့် ဖေါက်ခွဲခဲ့ပေမယ့် ဗုံးတစ်လုံးသာ ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ ဗုံးအရှိန်ဟာ ပြင်းထန်လွန်တာကြောင့် အာဇာနည်ဗိမာန်အမိုးကြီးတစ်ခုလုံး ပွင့်ထွက်သွားပြီး လူများ သေကြေပျက်စီး ဒဏ်ရာ ရရှိကုန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဗုံးပေါက်ကွဲပြီး နှစ်ရက်အကြာမှာ ဗုံးဖောက်ခွဲသူ မြောက်ကိုးရီးယား သုံးယောက်ထဲက ပထမဦးဆုံး တစ်ယောက်နဲ့ဖမ်းဖို့ ကြိုးစားစဉ်မှာ လက်ပစ်ဗုံးဖေါက်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ထိုနေ့ မှာဘဲ နောက်ထပ်နှစ်ယောက်ကို မြန်မာပြည်သူတွေက မသင်္ကာဖွယ်တွေ့ရှိလို့ရဲကို သတင်းပို့ လို့ရဲက ဖမ်းဆီးဖို့ ကြိုးစားစဉ်မှာ လက်ပစ်ဗုံးဖေါက်ခွဲလို့မြန်မာရဲ သုံးဦး သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ မြောက်ကိုရီးယားနှစ်ဦးကို ဒဏ်ရာများနဲ့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။
ဒီ ရန်ကုန်မြို့ က အာဇာနည်ကုန်းမှာ တောင်ကိုရီးယားသမတကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ မြောက်ကိုရီးယား သုံးဦးဟာ မြောက်ကိုရီးယား ထိပ်ပိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနေ အထူးစေလွှတ်ခဲ့တဲ့ မြောက်ကိုးရီးယား စစ်ကွန်မန်ဒိုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယား စစ်တပ်က ဗိုလ်မှူးတစ်ဦးနဲ့ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူ နှစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးရဲ့အမည်က Kang Min-Chul ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး သူတစ်ပါးနိုင်ငံထဲကို ခိုးဝင်ခဲ့ပြီး မြန်မာလူမျိုးတို့ ရဲ့အလေးအမြတ်ပြုတဲ့ အာဇာနည်ကုန်းလို နေရာမှာ ဗုံးဖေါက်ခွဲတာဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့လူမျိုးကို စော်ကားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗုံးပေါက်ကွဲမှုဟာ မတော်တစ်ဆ မဟုတ်ဘဲ မြောက်ကိုရီးယား ထိပ်ပိုင်းအာဏာပိုင်တို့ ကနေ စနစ်တကျ ကြိုတင်စီစဉ်ပြီးလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာပြည်သူအားလုံးကို မထေမဲ့မြင်ပြုပြီး ထင်ရာစိုင်း စော်ကားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များ ရုပ်ကလပ်လဲလျောင်းရာ ဂူများကို မြန်မာပြည်သူတွေ နှစ်စဉ် ဇူလိုင်လ (၁၉) ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့ မှာ လွမ်းဆွတ်တမ်းတစွာနဲ့သွားရောက် အလေးပြုဂါဝရပေးရာ နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ မြောက်ကိုးရီးယားတို့ ရဲ့လုပ်ကြံဗုံးဖေါက် စော်ကားမှုကြောင့် အာဇာနည်ဗိမာန်ကြီး မြင်မကောင်းအောင် ပျက်စီးစေခဲ့တာဟာ မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ အတူ အထွတ်အထိပ်ထားရာ အမျိုးသားသမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခု ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလို ဖြစ်ပျက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြောက်ကိုရီးယား အာဏာပိုင် တာဝန်ရှိသူတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ် တရားဝင်တောင်းပန်ခြင်း မပြုခဲ့ပါဖူး။ ဒီလို စော်ကားမှုကြောင့် မြန်မာပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ဒေါသထွက်ခဲ့ရသလို ထိုအချိန်က အုပ်ချူပ်နေတဲ့ အာဏာရှင် နေ၀င်းအစိုးရကတောင် မြောက်ကိုးရီးယားကို သံတမန်ဖြတ်တောက်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ယခု နအဖ သန်းရွှေလက်ထက်ကျမှ မြန်မာလူမျိုးတစ်ရပ်လုံးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်အပေါ် စော်ကားခဲ့တဲ့ မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကို ကိုယ်ကျိုးအတ္တအတွက်သာ ကြည့်ပြီး သံတမန်ပြန်လည်ဆက်ဆံရုံတင်မက၊ မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ် သတ်ဖြတ်နေတဲ့ လက်နက်တွေ ၀ယ်ယူတာ၊ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ ပေါင်းပြီး ညူကလီးယား လက်နက်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာတွေဟာ သန်းရွှေဦးဆောင်နေတဲ့ နအဖတစ်ဖွဲ့ လုံးကနေ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအပေါ် သစ္စာဖောက်တာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ဖေါ်ပြပါအတိုင်း မြောက်ကိုရီးယားဟာ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံကို အလည်အပတ် ရောက်လာခဲ့တဲ့ တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ ချန်ဒူးဝမ်နှင့် ဝန်ကြီးများအား ဗုံးထောင်ကာ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာ နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံရေး ပြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နအဖကနေ (၂ဝဝ၇) ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ ပြန်ပြီး သံတမန်အဆက်အသွယ် ပြုလုပ်ခဲ့ရုံမက။ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ကင်းလွတ်ရေး စာချုပ်များကိုပါ မကြာသေးခင်က ချုပ်ဆိုခဲ့ကြတယ်။
နအဖနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဉာဏ်ဝင်းကလည်း ကျန်ခဲ့တဲ့နှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်းက မြောက်ကိုရီးယားသို့ အလည်အပတ်ခရီး သွားရောက်ခဲ့တယ်။ နအဖခေါင်းဆောင်ကြီး သန်းရွှေကလည်း မြောက်ကိုရီးယား (ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ) နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာကင်ဂျုံအီး Kim Jong-il ရဲ့(၆၇) နှစ်မြောက် မွေးနေ့အတွက် သဝဏ်လွှာပေးပို့ခဲ့တယ်။
နအဖဟာ နေပြည်တော်မှာ မြောက်ကိုရီးယားတွေ အကူအညီနဲ့လျှို့ ဝှက်ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းတွေ တူးထားတယ်၊ မြောက်ကိုရီးယား ပညာရှင်တွေကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်၊ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို အလည်အပတ်သွားရောက်ခဲ့ကြတယ်၊ သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ မြောက်ကိုရီးယား သမတဟောင်း ကင်အီဆွန်းရဲ့(၉၇) နှစ်မြောက်မွေးနေ့အခမ်းအနားကိုလည်း ဒီနှစ် ဧပြီလတုန်းက ရန်ကုန် အင်လျားလိတ်ဟော်တယ်မှာ ကျင်းပတာကို နအဖထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြသေးတယ်။ ဒီမွေးနေ့ ပွဲကို နအဖ ဒုဗိုလ်ချူပ်ကြီး တင်အေး၊ ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝန် ဗိုလ်မှူးချူပ် အောင်သိန်းလင်းနဲ့ကြံ့ ဖွတ်ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေ အားတက်သရော တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။
ယခုဆိုလျှင်လည်း မြောက်ကိုရီးယား သင်္ဘောတစ်စီးဖြစ်တဲ့ Kang Nam 1 ဟာ ညူကလီးယားလက်နက်တွေ တင်ဆောင်ထားနိုင်တဲ့လို့မင်္သကာဖွယ်အနေအထားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို ဦးတည်သွားနေတယ်လို့ကမ္ဘာ့သတင်းဌာနတွေမှာ ဖေါ်ပြနေတာ တွေ့ ရတယ်။ နအဖဟာ ယခင်ကလည်း မြောက်ကိုးရီးယားသင်္ဘောတစ်စီးကို သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းမှာ ကပ်ရောက်ခွင့် ပြုခဲ့ဖူးပါတယ်။
နအဖအနေနဲ့ယခုလို မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပေါ်ပေါ်တင်တင် သံတမန်ပြန်လည်ဆက်ဆံတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က သိသာထင်ရှားလှပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားအကူအညီနဲ့ညူကလီယားလက်နက်တွေ ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ညူကလီယားလက်နက်တွေသာ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရင် မြင်းကို ဂျိုတတ်ပေးလိုက်သလိုဘဲ ထင်ရာစိုင်းမိုက်ရိုင်းတတ်တဲ့ နအဖဟာ မြောက်ကိုရီးယားထက် ပိုဆိုးပြီး ပြည်တွင်ပြည်ပ ဘယ်သူ့ ကိုမှ ဂရုမစိုက်တဲ့ အချိုးမျိုး ချိုးတော့မှာ သေချာပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူလူထုအပေါ်မှာလည်း ပိုမိုနှိပ်စက် ညှဉ်းပမ်းသတ်ဖြတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလို နအဖအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကို ပြည်သူလူထုဆန္ဒ မပါဘဲ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် သံတမန်ပြန်ဆက်ဆံခြင်းဟာ မြန်မာလူမျိုးတွေ ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့၊ တန်ဖိုးထားရာ သမိုင်းဝင်နေရာ ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တုန်းက အာဇာနည်ကုန်း ဗုံးဖေါက်ပြိုကွဲမှုကို လစ်လျူရှူလိုက်တာဖြစ်ပြီး မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့မျက်နှာကို အိုးမဲ ထပ်သုတ်လိုက်ခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နအဖဟာ မိမိတို့ ကိုယ်ကျိုးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာ ၀န်ချတောင်းပန်ခြင်း မပြုခဲ့တဲ့ မြောက်ကိုရီးယားကို ဒူးထောက်ခယလိုက်ပြီး လိုချင်တဲ့ ညူကလီယားလက်နက်တွေနဲ့မြန်မာလူမျိုးတို့ဂုဏ်သိက္ခာကို လဲပြစ်လိုက်တာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းကို ခံနေရတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားကို ဖက်လဲတကင်းလုပ်ပြီး မိုက်မိုက်ကန်းကန်း တွဲဘက်ပြလိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ့အတွက် မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပြန်လည်ဆက်ဆံလိုက်တဲ့ နအဖဟာ မြန်မာပြည်သူအများစုရဲ့ဆန္ဒကို မရယူဘဲ ငါတကော ကောကာ လုပ်ချင်ရာ လုပ်တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းဂုဏ်ရောင်၊ မြန်မာလူမျိုးတို့ ရဲ့အမျိုးသား ဂုဏ်သိက္ခာကို ညှိုးနွမ်းပျက်စီးစေရုံသာမက တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးနဲ့လူမျိုးတစ်ရပ်လုံးကို ကမ္ဘာ့အသိုင်းအ၀ိုင်းအလည်မှာ အရှက်ခွဲပြလိုက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် နအဖဟာ ဒီ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့သံတမန်ဆက်ဆံရေးကိစ္စမှာ နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအပေါ် အမျိုးသားသစ္စာဖောက်မှုကြီးတစ်ရပ်ကို ကြီးကြီးမားမား ကျူးလွန်လိုက်တာဘဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
Posted by Sanghaalliance at 10:56 AM0comments
အာဏာရှင်လက်ပါးစေတွေကို လက်တွေ့ တုန့် ပြန်ကြဖို့လိုပြီ။
မနေ့ ည (၉) နာရီခန့် က ရန်ကုန် မြောက်ဒဂုံမြို့ နယ်မှာ နေရာတိုင်းမှာ စော်ကားရိုင်းစိုင်းနေတဲ့ နအဖလက်ပါးစေ ကြံ့ ဖွတ်တွေရဲ့ရမ်းကားမှုကို ရပ်ကွက်တစ်ခုအတွင်းက လူငယ်များကနေ ပြန်လည်တုန့် ပြန်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ပြည်သူ့ ရင်သွေး လူငယ်လူရွယ်တွေအနေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်သွားလာနေကြတာကို နအဖလက်ပါးစေ ကြံ့ ဖွတ်တွေက အကြောင်းမဲ့ ပြသနာရှာပြီး လူငယ်တစ်ယောက်ကို ထိုးကြိတ်တဲ့အတွက် ကျန်သော ရပ်ကွက်နေ လူငယ်များကနေ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး ပြန်လည်တုန့် ပြန်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။
ဒီလို နအဖလက်ပါးစေတွေနဲ့လူငယ်တွေ အချင်းများနေစဉ်မှာ ပြည်သူအများ ၀ိုင်းအုံလာပြီး ရပ်ကွက်လူငယ်များဘက်ကနေ ပါဝင်ပူးပေါင်းဖို့ပြင်ဆင်လာတဲ့အချိန်မှာ အခြေအနေမကောင်းမှန်း သိသွားတဲ့ နအဖလက်ပါးစေတွေဟာ အလျင်အမြန် ထွက်ခွာသွားကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကို သုံးသပ်ကြည့်ရင် နအဖလက်ပါးစေ ကြံ့ ဖွတ်တွေဟာ အခွင့်အရေးရလို့ သာ ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာ စော်ကားရဲပေမယ့် တကယ်တမ်း ရဲရင့်တဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင် နဂိုမူလကိုက မမှန်ကန်တဲ့သူတွေဖြစ်လို့အမှန်တရားနဲ့စစ်မှန်တဲ့သတ္တိ မရှိကြဖူး၊ ထိပ်တိုက် မရင်ဆိုင်ရဲကြဖူး၊ တစ်ဦးချင်းစီ သတ္တိ မရှိဖူးဆိုတာ သက်သေပါဘဲ။
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ရွှေဝါရောင်တော်လှန် အစဦးအချိန်ကာလမှာလည်း ဒီကြံ့ ဖွတ်တွေဟာ ပြည်သူလူထုကို စော်ကားရုံတင်မကဖူး ပခုက္ကူမြို့ မှာ ရဟန်းသံဃာတော်တွေကို မိုက်ရိုင်းစွာ စော်ကားခဲ့ကြလို့သံဃာထုတစ်ခုလုံးနဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ တဲ့အချိန်မှာတော့ ကြံ့ ဖွတ်တွေ အသံတောင် မထွက်ရဲကြတာ သက်သေပါ။ ပြည်သူလူထုကလည်း အဆိုပါ မိုက်ရိုင်းခဲ့ကြတဲ့ ပခုက္ကုမြို့ က ကြံ့ ဖွတ်အတွင်းရေးမှူးနေအိမ်ကို ၀ိုင်းရံကြတဲ့အခါမှာ ဖနောင့်နဲ့ တင်ပါး တပြေးထဲကျအောင် ပြေးတာမှ တန်းနေတာဘဲဆိုတာ သိကြပါတယ်။
ဒီထက်ပိုပြီး ရှေးကျတဲ့ သက်သေသာဓကတွေ ရှိပါသေးတယ်။ အာဏာရှင်နေ၀င်းလက်ထက် မဆလပါတီ အင်အားကြီးနေချိန်တုန်းကလည်း ဒီလိုဘဲ အာဏာရျင်တွေရဲ့လက်ပါးစေတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာ အမျိုးမျိုးသော အာဏာပြ ညဉ်းပမ်းနှိပ်စက် အနိုင်ယူခဲ့ကြတဲ့ မဆလပါတီ တိုင်းနဲ့မြို့ နယ်ပါတီ ဥက္ကဌတွေ၊ အတွင်းရေးမှူးတွေ၊ ရဲစခန်းမှူးတွေ၊ လုံထိန်းတွေဟာ အင်မတန် ဆိုးရွားမိုက်ရိုင်းခဲ့ကြပါတယ်။ ယခုခေတ် မယကတွေ၊ ရယကတွေ၊ ကြံ့ ဖွတ်တွေနဲ့ပုံစံသာကွဲပြားတဲ့ ပြည်သူအပေါ် စော်ကားမိုက်ရိုင်းတာတွေကတော့ အတူတူပါဘဲ။
အဲ့ဒီ အာဏာရှင်လက်ပါးစေတွေဟာ ပြည်သူလူထုက လူထုအင်အားနဲ့စုပေါင်းပြီး နည်းနည်းလေးမှ ငုံ့ မခံတော့တဲ့အခြေအနေကိုလည်းရောက်ရော သွေးကြောင်ကုန်ကြပြီး ပြည်သူလူထုဘက်ကို ပူးပေါင်းလာတာများ “သာကူး” (သာတဲ့ဘက်ကို ချက်ချင်း ကူးပြောင်းသူများ ဖြစ်လို့အမည်တွင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်) လို့ ပါ အခေါ်ခံခဲ့ရတာတောင် အရှက်မရှိတော့ဘဲ မျက်နှာပြောင်တိုက် တောင်းပန်ဝန်ချပြီး ကူးပြောင်းခဲ့ကြတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက အခွင့်ရတုန်း အခြေအေနပေးတုန်း ပြည်သူက ငုံ့ ခံနေတုန်းသာ အာဏာတွေပြပြီး မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းစော်ကားခဲ့ကြပေမယ့် တကယ်တမ်း ပြည်သူတွေသာ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့မဟုတ်မခံ ပြန်တုန့် ပြန်ကြတဲ့အခါမှာတော့ ဒီ အာဏာရှင်လက်ပါးစေတွေဟာ အမြီးကုတ်ပြီး ထွက်ပြေးရင် ပြေးတဲ့သူက ပြေး၊ မလွတ်တဲ့အခါမှာ အမြီးလေး နှံ့ နှံ့ ပါအောင် ရမ်းပြီး မျက်နှာချိုသွေးကာ လွန်တာရှိ ၀န္တာမိပါလို့ပြောကြတဲ့သူတွေ ဖြစ်ကုန်တတ်ကြတာပါဘဲ။
အဆိုပါ အာဏာရှင်နေ၀င်း ကြီးစိုးနေတဲ့ မဆလခေတ်က ၁၉၈၈ ခုနှစ်ရဲ့အစကနဦး အချိန်တွေဖြစ်တဲ့ မတ်လ (၁၃) ရက်နေ့စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကိုဖုန်းမော် ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့အချိန်၊ မတ်လ (၁၆) ရက်နေ့အင်းလျားကန် တံတားဖြူကနေ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ သွေးမြေကျခဲ့ရတဲ့အတွက် တံတားနီအရေးအခင်းတွေမှာ ၁၉၈၈ ခုနှစ် နှစ်စ မတ်လကနေ နှစ်လည် ဇွန်လရောက်တဲ့အထိ တောက်လျှောက် မိုက်ရိုင်းခဲ့ကြတဲ့ အာဏာရှင်လက်ပါးသေ လုံထိန်းတွေဟာ စောစောက ပြောသလိုဘဲ အခွင့်အရေးရတာနဲ့ရိုက်ပုတ်သတ်ဖြတ် စော်ကားမိုက်ရိုင်းခဲ့ကြတယ်။
ဒါပေမယ့် ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၁) ၇က်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ မြေနီကုန်းအရေးအခင်းလို့အမည်တွင်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ပျက်မှုဟာ ကျောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေ ပူးပေါင်းမိကြပြီး အာဏာရှင်လက်ပါးစေတွေကို ပြန်လည်တုန့် ပြန်မှု စတင်ခဲ့တာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်စောစောပိုင်း မတ်လအရေးအခင်းတွေက ဘာမှပြန်လည်တုန့် ပြန်တာမျိုးမရှိခဲ့ကြဘဲ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ ဆန္ဒပြချီတက်မှုမှန်သမျှမှာ တစ်ဘက်သတ် ခံခဲ့ကြရတာပါ။
၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၁) ရက်နေ့ မှာတော့ အဖြူအစိမ်းဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြကြတဲ့ အထက်တန်းကျောင်း ကျောင်းသူကျောင်းသားငယ်လေးတွေကို အာဏာရှင်လက်ပါးစေ အကြမ်းဖက်သမား လုံထိန်းတွေက နံပါတ်တုတ်တွေနဲ့ ဝင်ရောက်ရိုက်နှက်၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးနဲ့ ပစ်၊ ကားနဲ့တိုက်ကြိတ်တာတွေ လုပ်တဲ့မြင်ကွင်းကို မြင်တွေ့ ရတဲ့ ပြည်သူလူထုဟာ မခံရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး တိုင်ပင်နေစရာမလိုဘဲ အားလုံးက အဆိုပါ အာဏာရှင်လက်ပါးစေတွေကို ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်တာကြပါတယ်။
နီးရာမှာတွေ့ ရှိရတဲ့ ပစ္စည်းများကို ကိုင်တွယ်ပြီး မိုက်ရိုင်းစော်ကားနေတဲ့ လုံထိန်းတွေကို ၀င်နှက်ကြလို့ပြည်သူလူထုရဲ့တကယ်လုပ်ရဲလာတဲ့ သတ္တိနဲ့လူထုအင်အားကို ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာတော့ အဆိုပါ အာဏာရှင်လက်ပါးစေ လုံထိန်းတွေ ထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ ပြည်သူလူထုဟာ ဆောက်လက်စ တိုက်တာအဆောက်အဦးရှေ့ မှာ ပုံထားတဲ့ အုတ်နီခဲတွေ သစ်သားချောင်းကိုကို တစ်ယောက်တစ်လက် ဆွဲယူပြီး လုံထိန်းတွေကို ၀င်ရောက်ပြစ်ခတ်ရိုက်နှက်ရုံတင်မကဖူး ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာ ခေတ်တစ်လျှောက်လုံး နှိပ်စက်အနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ မြေနီကုန်း မီးပွိုင့်လမ်းဆုံမှာ ရှိတဲ့ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်ရဲစခန်းကိုပါ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။
မြေနီကုန်းလမ်းမကြီးရဲ့ကတ္တရာအမဲရောင်ဟာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ သွေးတွေအပြင် ပြည်သူလူထုကနေ အာဏာရှင်လက်ပါးစေ လုံထိန်းတွေကို လက်တွေ့ ပြန်လည်တုန့် ပြန်ခဲ့တဲ့ အုတ်နီခဲအကျိုးအပဲ့အပိုင်းအစတွေကြောင့် လမ်းမကြီးတစ်ခုလုံးဟာ အဝေးကနေကြည့်တဲ့အခါမှာ အနီရောင် ဖုံးလွမ်းနေခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၁) ရက်နေ့ ကနေ စလိုက်တဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့တုန့် ပြန်မှုဟာ အရှိန်အဟုန်ကောင်းသွားပြီး မြို့ နယ်တွေ ရပ်ကွက်တွေထဲကို အာဏာရှင်လက်ပါးစေတွေ သူလျှိုတွေ မ၀င်ရလေအောင် မ၀င်ရဲလောက်အောင် ကျောင်းသားတွေ ရဟန်းသံဃာတွေ ပြည်သူတွေဟာ မိမိတို့မြို့ နယ် မိမိတို့ ရပ်ကွက် မိမိတို့လမ်းတွေကို မိမိတို့ ဘာသာ လုံခြုံရေးယူကြပြီး အပြင်လူ လူစိမ်း မ၀င်ရအောင် နေ့ ရောညပါ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြတယ်။
မိမိတို့ ဘာသာ လုံခြုံရေးကင်းတွေထားပြီး သူစိမ်းဝင်ရင် အာဏာရှင်လက်ပါးစေတွေ ချဉ်းကပ်လာရင် အကြမ်းဘက်မဲ့ စစ်တပ်လာရင် လမ်းမတွေကို ပိတ်ဆို့ တားဆီး၊ အချက်ပြသတင်းပို့ တာတွေ လုပ်၊ လိုအပ်သလို ပြန်လည်တုန့် ပြန်တာတွေ လုပ်ခဲ့ကြလို့ပြည်သူလူထုအားကြောင့် အာဏာရှင်တွေ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစေခဲ့ရပြီး မဆလတစ်ပါတီအာဏာရှင် ပြုတ်ကျစေခဲ့တဲ့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၈) ၇က်နေ့၈၈၈၈ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီး ဖြစ်အောင် အားကောင်းခဲ့ကြပါတယ်။
အထက်ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ အကြောင်းအရာတွေနဲ့သာဓကတွေကို ကြည့်ရင် - အာဏာရှင်နဲ့ အာဏာရှင်လက်ပါးစေတွေဟာ အခွင့်အရေးရလို့ သာ ပြည်သူလူထု့ အပေါ်မှာ ခြိမ်းခြောက်လိုက် ဖြိုခွင်းလိုက်နဲ့လုပ်လို့ ရတာပါ။ ပြည်သူလူထုဘက်ကသာ စုစည်းပြီး မတရားတာမှန်သမျှ စော်ကားမှုမှန်သမျှကို ခေါင်းငုံ့ မခံဘဲ တက်ညီလက်ညီနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီး ပြန်လည်တုန့် ပြန်ကြရင် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ကြရင် နအဖအာဏာရှင်တွေနဲ့လက်ပါးစေတွေဖြစ်တဲ့ ကြံ့ ဖွတ်တွေ စွမ်းအားရှင်အမည်ခံ လူရမ်းကားတွေ အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ ပြည်သု့ ချဉ်ဖတ်ရဲတွေဟာ ပြည်သူလူထုကို ဆက်ပြီး စော်ကားရဲမှာ မဟုတ်ပါဖူး။
အဓိက လိုအပ်ချက်ဟာ နီးစပ်ရာ နအဖလက်ပါးစေတွေကို မကြောက်မရွံ့ ဘဲ ပြည်သူလူထုက တစ်ယောက်တစ်လက်နဲ့ဝိုင်းဝန်းဆုံးမပေးကြဖို့ ပါဘဲ။ စော်ကားမှုတွေကို ခေါင်းငုံ့ ခံရင် ပိုစော်ကားခံရပါတယ်။ အထက်ကဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ သက်သေသာဓကတွေဖြစ်တဲ့ အာဏာရှင်လက်ပါးစေတွေ အသံတောင်မထွက်ရဲတဲ့လူထုရဲ့တုန့် ပြန်မှုကို တစ်ဦးချင်းအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အစုလိုက်ဖြစ်ဖြစ် လူထုတစ်ရပ်လုံးအင်အားနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် လက်တွေ့ လုပ်ကြရင်ဖြင့် အာဏာရှင်တိုက်ထုတ်ရေး လက်တွေ့ တော်လှန်ရေး ဆင်နွဲဖြစ်ပြီလို့ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရှင်တွေနဲ့လက်ပါးစေတွေ အကြောက်ဆုံးဟာ လက်တွေ့ပါတဲ့ ပြည်သူ့ အင်အားပါ။
ဒါကြောင့်မို့ လို့ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခွန်းလိုဘဲ “နီးရာရန်သူကို ရှာတိုက်” ဆိုတဲ့အတိုင်း နအဖလက်ပါးစေဒေါက်တိုင်တွေကို စတင်ဖြိုဖျက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြည်သူကို မိုက်ရိုင်းစော်ကားနေကြတဲ့၊ ပြည်သူကို အနိုင်ကျင့်နေကြတဲ့၊ ပြည်သူအပေါ် မတရားဆောင်ရွက်နေကြတဲ့သူတွေကို ပြည်သူလို သဘောထားပေးလို့မရတော့ပါဖူး။ နအဖအလိုကျလုပ်ဆောင်နေသူမှန်သမျှဟာ ပြည်သူမဟုတ်ပါ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ ရန်သူအဖြစ် “ရန် ငါ စည်းပြတ်” ဖို့ပြတ်ပြတ်သားသား ဆက်ဆံကြရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နအဖအလိုကျလုပ်ဆောင်နေသူတွေကို သတ်မှတ်ရမယ်ဆိုရင် အနီးဆုံးကနေ စပြောရရင် ကြံ့ ဖွတ်တွေ၊ ရယကတွေ၊ မယကတွေ၊ ရဲတွေ၊ လုံထိန်းတွေအပြင် မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် တစ်ဘို့ ထဲသာကြည့်ပြီး အေးအေးဆေးဆး မနေဘဲ ပြည်သူကို နအဖအလိုကျ လိုက်လံဒုက္ခပေးနေတဲ့ (မ) တရားသူကြီးတွေ၊ နအဖအလိုကျ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအပေါ်မှာ ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့ ဖောက်ပြန်ရေးသမား ကျောင်းအုပ်ချူပ်သူတွေ၊ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေပါ ပါပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကိုယ်ထိလက်ရောက် အရင်ဆုံးစော်ကားလေ့ရှိကြတဲ့နအဖလက်ပါးစေ ကြံ့ ဖွတ်တွေနဲ့စွမ်းအားရှင်အမည်ခံ ရမ်းကားမိုက်ရိုင်းသူတွေကို ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ ရပ်ကွက်အတွင်း မြို့ နယ်အတွင်းမှာ လက်တွေ့ တုန့် ပြန်ကြပြီး စော်ကားမှုတွေကို လူထုအားနဲ့ ချေမှုန်းဖြစ်ဖို့ သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူလူထုအားသည်သာ အခယာ ဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့ အားသည်သာ စစ်မှန်သောအား ဖြစ်ပြီး ပြည်သူ့ အားကို အသုံးပြုကြဖို့လိုသည်။
Posted by Sanghaalliance at 9:09 AM0comments
Happy Birthday To Church
ဒီနေ့ဟာ စီအဲန်အဲန်က ဂျီးတော် ဒေါ်ဘေဘီမွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်ဘေဘီအတွက် မွေးနေ့မှာ စတုဒီယိုခန်းထဲ ရောက်အောင်ပို့လိုက်တယ်။ ကျန်းမာစေ၊ ချမ်းသာပါစေ။ လားမားကြီးနဲ့လည်း ထပ်မံတွေ့နိုင်ပါစေ။
အခုမိနစ်အပိုင်းအတွင်းမှာပဲ မက္ကဆီကိုက မီးလောင်ပျောက်ဆုံး သေဆုံးသတင်းကိုလွင့်ဖို့ ၀ုန်းဒိုင်း ဒုံးစိုင်း လုပ်ပြီး မြင်းရိုင်းလေးလို စတုဒီယိုထဲဝင်သွားချေပြီ။
64 for Suu မှာလာအားပေးသွားတဲ့အတွက်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်စားကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။